Ngaphandle smartphone kuphi manje: kuyindlela yokuxhumana kanye nokufinyelela ku-intanethi futhi e-isikhwama ephaketheni lakho. Umenzi engcono kule ndawo futhi ubhekwa isikhathi eside uthathwa njengoba Apple, kodwa ngisho asenawo Igumbi ukuhambisa. Phela, kunenkinga ezehlela bonke izinkampani smart phone, okuyinto Apple uye yanquma. Kumayelana ibhethri lishesha kakhulu. Sekuphele iminyaka ecishe ibe ishumi, kwakhululwa i-iPhone kuqala, abasebenzisi Apple imikhiqizo ezimele ekugcineni ephuma idivayisi olukwazi ukusetshenziswa ne bukhoma asebenzayo ngaphandle lingatshajwa kuphele izinsuku ezintathu okungenani. Ungakwazi Yiqiniso, bayakhohlwa yokuxhuma i-inthanethi futhi izinhlelo ezisebenzisa smartphone kuphela izingcingo, kuleso simo idivayisi ibhethri elula isikhathi eside impela, kodwa-ke kungani ukuthola smartphone Amatebhe ezibizayo ezifana?
Ngenhlanhla, Ngathola indlela yokuphuma nge obhekwe amabhethri ephathekayo, noma njengoba bebizwa yokuqala, Amandla Bank. Lezi "amabhange" ime ngezindlela ezihlukahlukene futhi ayilingani, izici ezengeziwe futhi mahhala, kodwa konke wadala nomunye umgomo - ukukhonza kudivayisi yakho yeselula. Manje, esimweni lapho Kuyaphuthuma uxhumano, kanye smartphone yakho nemizana ngokukhohlisa ezithengisa akuzona eduze, basisize Ishaja ephathekayo ye-iPhone 5.
Indlela ukukhetha imodeli best, uma emakethe yabo manje abaningi? Ukuze lokhu kufanele kubhekwe okungcono.
Ngakho, uhlu engcono esondweni ephathekayo imele, okuyizinto ekahle iPhone yakho.
Mophie Juice Pack emoyeni
Abaningi akazange alinge ukutshala ibhethri yangaphandle, ngoba ukudida ukuntuleka compactness kwezinye onobuhle noma isidingo ukuxhuma nabo nge ikhebula, kusukela lapho kubonakala khona esingesihle ukugcina smartphone yakho futhi inkokhelo ke ngesikhathi esifanayo. Ikakhulukazi le isikhathi eside band wakhulula Mophie Juice Pack Air - Ishaja ephathekayo ye-iPhone 5 ngesimo ikhava.
Uqinisile: kumane nje kudivayisi igqoke smartphone yakho futhi ihlinzeka ikhava (kukhona onobuhle ngisho elinama okuhlala isikhathi eside ukuthi ivikela ifoni yakho kusukela amathonsi), futhi uma kukhona isidingo lingatshajwa, umane ngokucindezela sikhule size sibe inkinobho ephathekayo ibhethri.
Ububi eyinhloko umthamo webhethri: nje 1700mAh. Cishe inani elifanayo e ibhethri ye-iPhone 5s. umthamo webhethri "Mofi" anele mayelana necala umnyuziki iPhone. Kukhona amamodeli enamandla kakhulu, kodwa abawona ukhululekile ngakho.
Sonke lesi "pauerbankom" kulungile. Kwacatshangwa yonke imininingwane emihle. Ngaphezu cutout lunembile ikhamera bese isikhulumi nazo "kabili" anikezwa ku nezindlu zonke izinkinobho. Lenqwaba kuhlanganisa adaptha esikhethekile-headphone.
Ngaphezu kwalokho, Mophie - omunye izinkampani ezimbalwa ngokomthetho ovunyelwe ukusebenzisa Apple ubuchwepheshe, ngakho phansi icala uzothola ipulaki Umbani. Awudingi iyiphi i-adaptha ukuze iPhone.
Lokhu ishaja ephathekayo ye-iPhone 5s e izici zayo uhluke imodeli odlule. Okokuqala, kungenxa Ubukhulu ovelele: idivayisi kunalokho ntathu, compact awusebenzi igama - 4.4 x 6.6 x 0.6 amayintshi. Futhi isisindo saso singamakhilogremu ikhilogremu. Kodwa umthamo webhethri umxhwele ngempela - amaningi njengoba 20,000 mah. Lokhu kwanele ukushaja iPhone yakho tandla emahlandla la -10 ngaphambi ibhethri yangaphandle ihlala.
Ngo devayse lwenteke PowerIQ ubuchwepheshe ekhethekile. It ikuvumela ukuba ukunquma uhlobo idivayisi ixhunywe Anker, okuyinto kakhulu kwandisa ijubane ukushaja. A isibonisi encane ikutshela izinga lebhethri zamanje.
Hhayi imodeli esikahle kakhulu ekuthwaleni, kanye ukulunywa intengo, kodwa imisebenzi yalo ngqo lokubhekana bang.
Xiaomi Mi Amandla Bank 10400 mah
Xiaomi - nomkhiqizi Smartphones eyaziwa emakethe Asian. Ngemva kokuba ikhiphe uchungechunge amashaja azimele wodwa, imikhiqizo zibe okufunekayo iPhone abasebenzisi.
Njengoba leli gama lisikisela, le umthamo webhethri ka 10.400 mah. Kumayelana ezine amacala ngokugcwele iPhone 5s, okuyinto kuhle. Idivayisi icwecwe kakhulu, isisindo ongaphakeme - 250 g "Pauerbank" Inama-USB port futhi LED icala izinkomba ezine.
Yini ehlukanisa amabhethri ephathekayo Xiaomi ngakolunye, kungcono design stylish minimalist. Le modeli uyobheka okukhulu eceleni iPhone yakho. Kulokhu, abanakumjabulisa intengo idivayisi - ruble 1500.
RAVPower RP-WD01 Wireless-Wi-Fi-Disk
Thola lokhu imodeli ngisho simple, kodwa ukukhuluma mayelana ubuhle bakhe. Mhlawumbe lena yiyona ndlela ishaja enemisebenzi kakhulu ephathwayo iPhone 5. Izibuyekezo ngakho ezithophayo kakhulu, ngakho banake "pauerbank".
umthamo webhethri akuyona umxhwele kakhulu - 3,000 mah. Kodwa esimweni sethu akunandaba, ngoba nje okukodwa RAVPower iba iphuzu zokungena Inthanethi. Empeleni, uma ujwayele ulisebenzise ukuze uthumele-Wi-Fi, bona ukushaja smartphone yakho akunakwenzeka ukuba aphumelele, ingxenye kakhulu ibhethri yangaphandle iyohlala phansi.
Wireless ayizikhondlakhondla Inthanethi kudivayisi ukudluliswa ayigcini. Ingase futhi ukufunda le-SD yememori khadi, leyo ecaleni lakhe kukhona Isixhumi okhethekile.
Akunakwenzeka ukuba uqaphele ubukhulu imodeli. "Pauerbank" lincane kakhulu ngendlela lokhu wakwenza kanjani, ukuhlinzeka zonke izici ezithuthukile.
Siphendukela ekugcineni a onobuhle compact ngempela futhi yesikhumbuzo. Jackery Mini ukulingana okungaka esikhwameni, kodwa futhi ephaketheni trouser yakhe.
umthamo webhethri kwanele icala emibili egcwele iPhone yakho, futhi kuhle ohloniphekile idivayisi encane kangaka. Ngaphezu kwalokho, imodeli wesilisa kusimangaze amanani abo aphansi. Okuningi ukusho ngakho ngokuvamile, futhi akukho.
CHOETECH flashlight Amandla Bank
abathandi Izikhangibavakashi nazo zonke izinhlobo zezinsimbi Kuzonyuka kakhulu uzokubona lolu ishaja ephathekayo ye-iPhone 5, ngoba flashlight eyakhelwe ngaphakathi. Ishaja akesabi cishe akukho ukwehla.
Ngokuqondene Umsebenzi oyinhloko, khona-ke CHOETECH flashlight ubhekana kahle. Nalapha futhi, i-lalilincane. I umthamo webhethri ka 5200 mah, okuyokwenza isikhathi esithe xaxa ukushaja idivayisi yakho yeselula.
Fly: Izibuyekezo amafoni of the gama elifanayo umenzi